စီးပွားရေး ဒိုင်ယာရီ (Dec 29,2018) | မာသင်
စီးပွားရေး ဒိုင်ယာရီ (Dec 29,2018)
ဘ၀ ဆိုတဲ့အမြန်လမ်းမှာ ခရီးနှင်ကားမောင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်
လီဗာနင်းပြီး အရှိန်မြင်ေ့နပေမယ့် ..နောက်ခြေတစ်ဖက်မှာ
ဘရိတ်နင်းပြီး ကြောက်ရွံစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အတူ မောင်းနှင်နေရင်
လီဗာ…. နင်းတဲ့အခါ နင်း ၊
ဘရိတ်… နင်းတဲ့အခါ နင်း ပေါ့။
နောက်ခြေတစ်ဘက်က ဘာလုပ်ရမှာလဲ လို့မေးရင် ၊
ဘေးမှာ အသာလေးချထားပြီး ….
ကားမရှိခဲ့တဲ့ ဘ၀ အစိတ်အပိုင်း အချိုးအကွေးပေါင်းများစွာမှာ
မြေကြီးပေါ်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းချပြီး..ရုန်းခဲ့ရတဲ့ရက်ပေါင်း များပြီလေ။ ။